मुलुकभर दुई लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
मुलुकभर दुई लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट
काठमाडौं । सरकारले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएकाले निर्धक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण मतदातालाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सुरक्षित तरिकाले सम्पन्न गर्न राज्यका चारवटै सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको हो । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारी स्तरबाट विभिन्न स्रोत, साधनहरू परिचालित भइसकेको र स्वयं मतदाताहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकोले संयमित भएर मतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गरेको हो । ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना-०७८’ कार्यविधिअनुसार सरकारले मुलुकभरको निर्वाचन केन्द्रमा म्यादी प्रहरीसहित तीनवटै सुरक्षा निकायका दुई लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा खटाएको छ ।
जसमध्ये म्यादी प्रहरीको संख्या सबैभन्दा धेरै एक लाख छ । निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी एक लाख ७० हजारको हाराहारीमा खटाएको छ । नेपाल प्रहरीबाट ६२ हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार र नेपाली सेनाका ७१ हजार जनशक्ति खटिएका छन् । सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै सुरक्षाकर्मी गृह मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको कमान्डमा परिचालित छन् ।
निर्वाचनको सुरक्षाबारे जानकारी दिँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना-०७८ अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सबै सुरक्षाकर्मीलाई कमान्ड गर्न गृह मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समिति गठन भएको छ । सोही समितिको कमान्डमा रहेर मुलुकभरका सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन् ।’
समितिलाई प्रवक्ता पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको अर्को उपसमितिले सहयोग गरिरहेको छ । उपसमितिमा सेनाका तर्फबाट सहायक रथी, नेपाल प्रहरीको तर्फबाट डिआइजी÷एसएसपी र सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट पनि डिआइजी/एसएसपी रहेका छन् । मुलुकभर खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वय उक्त उपसमितिले गरिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाएर त्यसै योजनाअनुसार सम्पूर्ण सुरक्षा परिचालित भएको र स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि राज्यले चुस्त, दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो । अहिले मुलुक नै निर्वाचनमय भएकोले निर्वाचन शन्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सरकारी स्तरबाट सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू निर्वाचनमा परिचालित गरेका छौँ । हाम्रा सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई हामीले निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न, हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको नीति पनि बनेको छ, एकीकृत सुरक्षा योजना । प्रत्येक जिल्लामा पनि सुरक्षा योजना बनेर त्यही सुरक्षा योजना मुताविक हाम्रो सम्पूर्ण सुरक्षा परिचालित भएको अवस्था छ । त्यसकारणले राज्यले चुस्त, दुरुस्त, सुरक्षा व्यवस्थापन गरिराखेको अवस्था छ एकातिर भने अर्कातिर सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिनुभएको अवस्था छ । उहाँहरूले पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा चासो राखेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । आम नागरिक, नागरिक समाजले पनि सुरक्षामा चासो राखेर कतै निर्वाचनलाई बिथोलिने काम गर्नुहुँदैन, हामी सबैले निर्वाचनलाई सघाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको हुँदा अहिले राज्य नै निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचन शन्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु ।’
कुन सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी के ?
एकीकृत सुरक्षा कार्यविधिअनुसार मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीका सुरक्षाकर्मी रहनेछन् । उनीहरूले मतदानस्थल, मतपेटिका, मतदानस्थलमा खटिएका कर्मचारी, मतदाता सबैको सुरक्षा गर्नेछन् । मतदातालाई लाइनमा बस्न मिलाउने, मतदान स्थलमा अवाञ्छित गतिवधि गर्न नदिने, मतदानस्थलमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई रोक्ने पनि नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीकै जिम्मा हुनेछ । मतदान केन्द्रमा हुलहुज्जत गर्ने, आफ्नो पार्टीमा मत दिन दबाब दिने समूहलगायत शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने जिम्मेवारी पनि नेपाल प्रहरीकै छ । उम्मेदवार र मतदाताको संरक्षण गर्ने, मतपेटिकाको सुरक्षा गर्ने, मतगणनास्थल शान्तिपूर्ण राख्ने, विजय उत्सवका लागि निस्कने ¥यालीसमेतको सुरक्षा दिने जस्ता कार्य गर्नेछ ।
निर्वाचनका लागि सुरक्षाको तेस्रो घेरामा रहने सशस्त्र प्रहरीले मतदान केन्द्रको बाहिरी सुरक्षा गर्नेछ । निर्वाचनको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई मुलुकभरका सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा, जिल्ला निर्वाचन अधिकृत, गाउँपालिकास्तरीय निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारको सुरक्षा गर्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यससँगै मतपेटिका तथा मतपत्रको ढुवानी, मोबाइलगस्ती पनि सशस्त्र प्रहरीले गर्नेछ । यस्तै, परेको समयमा आकस्मिक परिचालन गर्न तम्तयार अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीका टोली रहनेछन् ।
निर्वाचन सुरक्षाको चौथो घेरासहित मतपत्र छपाइ, मतपत्र ढुवानी र मतपेटिकाको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई छ । योसँगै मुलुकभरका सबै कारागार, भिभिआइपी तथा भिआइपी निवासलगायत सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील सबै स्थानको सुरक्षा जिम्मा पनि सेनाले नै पाएको छ । सेनाले बाहिरी सुरक्षा र अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील जिल्लाका मतदानस्थलको सुरक्षा गर्नेछ । विस्फोटक पदार्थलाई निष्क्रिय पार्ने, सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम आवश्यक फौज परिचालन, मतपत्र छपाइ, मतपेटिका ढुवानीको जिम्मेवारीसमेत सेनालाई दिएको छ । मतदान केन्द्रमा अवाञ्छित गतिविधि देखाउने समूह तथा व्यक्तिलाई गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार हरेक मतदान केन्द्रका अफिसरलाई हुने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना संकलनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि मतदानको ७२ घण्टा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू बन्द गरिएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा सुरक्षा थ्रेट
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको जनाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि सीमा नाका बन्द गरिएको छ भने सम्भावित जोखिम हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । विशेष गरेर मधेश प्रदेशमा सुरक्षा थ्रेट रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मधेश प्रदेशमा भयरहित वातावरणमा मतदान गराउन सीमा नाका बन्द गरिएको छ । देशभरिका मतदान केन्द्रमध्ये मधेश प्रदेशमा रहेका एक हजार ६३ वटा मतदानस्थल र दुई हजार ९९ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो ।
केसीका अनुसार सबैभन्दा बढी धुनषाका १८३ वटा मतदानस्थल र ३३४ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सप्तरीमा २०८ मतदानस्थल र ३८० मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सिरहामा १७० वटा मतदानस्थल र ३८२ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा रणनीतिअनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।
महोत्तरीका ११० मतदानस्थल, २१४ मतदान केन्द्र, सर्लाहीका १०३ मतदानस्थल र २०५ मतदान केन्द्र, रौतहटमा ८३ वटा मतदानस्थल र १६१ मतदान केन्द्र, बारामा १४४ वटा मतदानस्थल र २५६ वटा मतदान केन्द्र र पर्सामा ६२ वटा मतदानस्थल तथा १६७ मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशका ८८८ वटा मतदानस्थल र एक हजार ६८६ वटा मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । जम्मा दुई हजार १६३ वटा मतदानस्थल र चार हजार १८९ वटा मतदान केन्द्र रहेकोमा २१२ वटा मतदानस्थल र ४०४ वटा मतदान केन्द्रलाई सामान्यमा राखेर सुरक्षा योजना बनाइएको छ । प्रवक्ता केसीले निर्वाचनको क्रममा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च हिमाली भेगहरू र खुला सीमा नाका भएका क्षेत्रमा पनि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको जानकारी दिनुभयो । खुला नाका भएका क्षेत्रहरूमा साना हातहतियारको प्रयोग हुनसक्ने र निर्वाचनलाई लुकीछिपी अशान्ति मच्चाउन सक्ने तत्वहरूमाथि नेपाल प्रहरीले आफ्नो निगरानीमा राखेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो । चारवटै सुरक्षा निकायहरूले जुनकुनै किसिमको चुनौतीलाई पनि सामना गर्नसक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन : चितवनमा
फिलिपिन्समा फर्डिनान्ड मार्कोसको सपथ
लुम्बिनी र प्राचीन तिलौराकोटको